Russia inoraira yenyika 'isiri-kushanda svondo' sezvo COVID-19 kufa kuchikwira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Russia Kuputsa Nhau » Russia inoraira yenyika 'isiri-kushanda svondo' sezvo COVID-19 kufa kuchikwira
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Russia inoraira yenyika 'isiri-kushanda svondo' sezvo COVID-19 kufa kuchikwira.
Nhamba dzekufa kwezuva nezuva dzeCOVID-19 dzekuRussia dzave kuwanda kwemavhiki uye dzakaburitsa chiuru kekutanga panguva yevhiki pakati pehusimbe hwejekiseni, maitiro eruzhinji pamusoro pekutora matanho uye kusagadzikana kwehurumende kuzviomesera.
Russia yakashuma 1,028 kufa kweCOVID mumaawa makumi maviri nemana, iri nhamba yepamusoro kubva patanga denda iri.
Nhamba yakakura kwazvo yekufa yakataurwa mumaguta makuru maviri emunyika, Moscow neSt.
Paive zvakare nekuwedzera nekukurumidza muhuwandu hweyedzo yakanaka yehutachiona, nevanhu makumi matatu nemakumi matatu nevatatu vakasimbiswa kuve vakatapukirwa panguva imwecheteyo.
Vashandi veRussia vakarairwa kuti varege kuenda kubasa kwevhiki kutanga kupera kwemwedzi uno panguva yekukwira kwehuwandu hwehutachiona hweCOVID-19 nekufa.
Mutungamiri weRussia Vladimir Putin akabvumidza hurongwa hwehurumende hwekuraira vashandi munyika yese vhiki rekuzorora, nechinangwa chekumisa kukwirisa kwakakura muhuwandu hwevakafa kubva ku coronavirus.
Chikwata chehurumende yeRussia neChitatu chakazivisa zviuru gumi nemakumi maviri nezviviri zvekufa kweCOVID mumaawa makumi maviri nemana apfuura, iri nhamba yepamusoro kubvira pakatanga denda iri. Izvo zvakaunza Rashiyahuwandu hwevakafa kusvika ku226,353, inova ndiyo yepamusoro soro muEurope.
Pamusangano wevakuru vehurumende neChitatu, Putin akapa mukana wekugadzirira kuwedzera mazuva maviri akarongwa zororo renyika uye kuchengetedza vashandi vazhinji pamba, nemubhadharo, kwevhiki rese.
Pasi pehurongwa, mahofisi achavharwa nyika yese pakati paGumiguru 30 naNovember 7, asi Putin akawedzera kuti mune mamwe matunhu mamiriro ari kutyisidzira zvakanyanya, iyo isiri-nguva yekushanda inogona kutanga kutanga Mugovera uye kuwedzerwa mushure maNovember 7.
Zvinoenderana naPutin, izvozvi zvakakosha kuti Rashiya "Inodambura cheni yekupararira kwehutachiona… Basa redu guru ikozvino kuchengetedza hupenyu hwevagari uye, nepose pazvinogona, kudzikisira hutachiona hwe COVID-19."
Chirongwa ichi chinodawo kuendesa vese vasina kuvharirwa vane makore anodarika makumi matanhatu kuenda kunzvimbo iri kure-yekushanda kwemwedzi unotevera, uye vopa vashandi mazuva maviri akaparadzana ekuenda kunovharirwa COVID-60.
RashiyaNhamba dzevanhu vanofa dzezuva nezuva dze COVID-19 dzave kuwanda kwemavhiki uye dzakapetwa chiuru kekutanga mukati mevhiki pakati pehuwandu hwehutachiwana hwehutachiwana, hunoregeredza ruzhinji maonero ekutora matanho uye kusagadzikana kwehurumende kuzviomesera.
Vanosvika mamirioni makumi mana nemashanu maRussia, kana makumi matatu nemaviri muzana yenyika inoda kusvika 45 miriyoni yevanhu, vakabaiwa zvakakwana.
Mune mamwe matunhu, kuwedzera kweutachiona kwakamanikidza zviremera kumisa rubatsiro rwekurapa kuvanhu sezvo zvivakwa zvehutano zvakamanikidzwa kutarisa pakurapa varwere vecoronavirus.
In Moscow, zvakadaro, hupenyu hwaenderera mberi senguva dzose, nemaresitorendi nemitambo yemamuvhi yakazara nevanhu, mhomho dzevanhu dzinozadza makirabhu ehusiku uye mabara e karaoke uye vafambi vazhinji vasingateereri mirau yekufambisa paruzhinji, kunyangwe zvikamu zvekuchengetedza zvakanyanya zvakazadza mumavhiki apfuura.
Pakutanga neChitatu, vakuru veRussia vakazivisa kuti nyika yakanyora huwandu hwevakafa zvakanyanya zvine chekuita necoronavirus kubva pakatanga denda gore rapfuura uye kuti huwandu hwakawanda hwevakafa hwakataurwa mumaguta makuru maviri emunyika, Moscow uye St. Petersburg.